बैंकिङ(Banking) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
बैंकिङ प्रणालीमा थपियो एकैदिन रु. ९ अर्ब, सीडी रेसियो कति ?
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा मंगलबार एकैदिन ९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असार १४ गते (मंगलबार) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ९ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो। योसँगै कुल निक्षेप ४९ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार १३ गतेसम्म कुल निक्षेप ४९ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। यो एक दिनमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप पनि ७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। गत असार १३ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा असार १४ गतेसम्म बढेर ४४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा...
ट्रेजरी बिलको ब्याजदर रेकर्ड लेभलमा, बैंक ब्याजदर पनि बढ्ने संकेत ?
काठमाण्डौ । सरकारले अल्पकालीन अवधिका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन ट्रेजरी बिल जारी गर्दै आएको छ। सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता ट्रेजरी बिल जारी गर्ने गर्छ। यस्ता ट्रेजरी बिल १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो। सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिक ट्रेजरी बिल किन्न पाउँछन्। विशेषगरी राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता बढी भएको खण्डमा पैसा तान्ने उद्देश्यले वा आन्तरिक ऋण उठाउन नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत पनि ट्रेजरी बिल जारी गर्छ । ट्रेजरी बिल खासगरी २८ दिने, ९१ दिने,...
डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै कमजोर
काठमाण्डौ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै कमजोर बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि तय गरेको विनिमय दरअनुसार १ अमेरिकी डलरको बिक्री दर १२६.३४ रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात अब १ डलर खरिद गर्न १२६ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेछ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अमेरिकी डलरको बलियो बन्दै गइरहेको छ। रुस–युक्रेन युद्धका कारण अमेरिकी डलरको माग उच्च हुँदा यसको भाउ पनि बढ्दै गएको हो। यसअघि अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १२५.६६ रुपैयाँ पुगेको थियो। जुन हालसम्मकै उच्च थियो। यो उच्च दरबाट घटेर स्थिर बनेको डलरको भाउले पुनः नयाँ रेकर्ड...
बैंकहरुको निक्षेप एकैदिन रु. ५ अर्बले बढ्यो, कर्जा लगानी रु. १ अर्बले घट्यो
काठमाण्डौ । बैंकिङमा एकैदिन ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार १२ (आइतबार) बैंकिङ प्रणालीमा एकैदिन ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको हो। योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ४९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार ११ गते कुल निक्षेप ४९ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। वाणिज्य बैंकहरुमा पनि आइतबार एकैदिन ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। गत असार ११ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा असार १२ गतेसम्म बढेर ४४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असार...
लघुवित्तको संख्या ६५ मा झर्यो, कर्णालीमा उपस्थिति सबैभन्दा न्यून
काठमाण्डौ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेर ६५ मा झरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०७८ चैत मसान्तसम्म तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समयमा मर्जर र एक्विजिसनका कारण लघुवित्तको संख्या घटेको हो। गत २०७८ असार मसान्तसम्ममा ७० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेकोमा २०७८ चैत मसान्तसम्ममा घटेर ६५ कायम भएको छ। यद्यपि शाखा विस्तारको क्रम भने जारी नै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। हाल ४ वटा थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् भने बाँकी ६१ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु छन्। लघुवित्तहरुको शाखा संख्या २०७८ असारको...
सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने सिन्धु विकास बैंकको निर्णय
काठमाण्डौ । सिन्धु विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ। बैंक सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरु स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सोही निर्णयमा सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने जानकारी पनि गराइएको छ। ...
प्रदेश विकास बैंक फोरम गण्डकीको संयोजकमा मुक्तिनाथका केसी चयन
काठमाण्डौ । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियनको गण्डकी प्रदेश च्याप्टरअन्तर्गत गण्डकी प्रदेश विकास बैंक फोरमको सोमबार बसेको भेलाले मुक्तिनाथ विकास बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख शंकर केसीलाई संयोजकमा चयन गरेको छ। यसअघिका संयोजक तथा गरिमा विकास बैंक पोखरा क्लसटर प्रमुख भोला तिवारीको केन्द्रीय कार्यालयमा सरुवा भएकोले रिक्त पदमा केसीलाई चयन गरेको हो। उक्त कार्यक्रममा गरिमा विकास वैंकका नयाँ क्लसटर प्रमुख भक्तबहादुर केसीलाई स्वागत गर्दै कार्यसमिति सदस्यमा चयन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ। संयोजक चयन भएपश्चातको कार्यक्रममा केसीेले सामूहिक रुपमा विकास...
ग्रीन डेभलमपमेन्ट बैंकको कामु सीईओमा हरिबहादुर बुढाथोकी नियुक्त
काठमाण्डौ । पोखराको सभागृहचोकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ग्रीन डेभलमपमेन्ट बैंक लिमिटेडको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ)मा हरिबहादुर बुढाथोकी नियुक्त भएका छन्। बैंकका कर्जा तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन विभाग प्रमुख बुढाथोकीलाई बैंकको सञ्चालक समितिको जेठ ३१ गते बसेको १७६ औँ बैठकले आज असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकको कामु सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो। बुढाथोकीसँग विगत १६ वर्षभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव रहेको छ। चार वर्षअगाडि बैंकको सीईओमा भएका उमेशकुमार आचार्यको यही जेठ ३१ गते कार्यकाल समाप्त भएकोले बुढाथोकीलाई कामु सीईओमा नियुक्त...
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिमा सोमबार साँझ बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य सञ्चित मुनाफाबाट १० करोड ३० लाख ५५ हजार ८६.१३ रुपैयाँ खर्च हुने गरी हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब १५ करोड १७ लाख ९२ हजार १३९.११ रुपैयाँको कुल ८.९५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसमा ८.५ प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ७९ लाख २ हजार ३३१.८२ रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.४५ प्रतिशतले हुन आउने ५१ लाख ५२ हजार ७५४.३१ रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश छन्। प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र...
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले डाक्यो विशेष साधारणसभा, हकप्रद जारी गर्ने मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले विशेष साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले विशेष साधारणसभा आउँदो असार ८ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा चितवनको टाँडीस्थित होटेल पौवा (होटेल स्टार चितवन) मा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले हाल कायम चुक्तापुँजी २६ करोड २४ लाख ६७ हजार ६०० रुपैयाँमा थप १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयरी जारी गरी चुक्तापुँजी ५२ करोड ४९ लाख ३५ हजार २०० रुपैयाँ कायम गरी चुक्तापुँजी वृद्धि गर्ने विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गर्नेछ। सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने अर्को प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ। सभा...
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको २५% बोनस सेयर डिम्याट खातामा
काठमाण्डौ । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि वितरण गरेको २५ प्रतिशत बोनस सेयर सेयरधनीको डिम्याट खातामा जम्मा गरिदिएको छ । संस्थाले पुस २० गतेसम्म सेयर अभौतिकीकरण गराएका सेयरधनीको बोनस सेयर डिम्याट खातामा जम्मा गरिदिएको हो। हालसम्म सेयर अभौतिकीकरण नगरेकाहरुलाई सेयर अभौतिकीकरण गर्न र त्यसपछि मात्र डिम्याट खातामा बोनस सेयर जम्मा हुने संस्थाले जनाएको छ। यो लघुवित्तको गत पुस ३० गते सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल २६.३२ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गरेको थियो। जसमा २५ प्रतिशत बोनस...
प्राप्ति प्रक्रिया टुंग्याउन मिर्मिरे र बुद्धज्योति लघुवित्तले डाके एकैदिन विशेष साधारणसभा
काठमाण्डौ । मिर्मिरे लघुवित्तले बुद्धज्योति लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन दुवै लघुवित्तले एकैदिन विशेष साधारणसभा डाकेका छन्। दुवै लघुवित्तको हिजो असार १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यही असार ३१ गते विशेष साधारणसभा डाकेका हुन्। मिर्मिरे लघुवित्तको विशेष साधारणसभा काभ्रेको धुलिखेलस्थित होटेल सारथी र बुद्धज्योति लघुवित्तको रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिकास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। दुवै सभाले मिर्मिरेले बुद्धज्योति प्राप्ति गर्ने विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गर्नेछन्। प्राप्ति प्रयोजनका...
हकप्रद र ऋणपत्र जारी गर्न पाउनुपर्ने लघुवित्तको माग, यस्ता छन् मौद्रिक नीतिमा अन्य सुझाव
काठमाण्डौ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि हकप्रद सेयर र ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले यस्तो माग गरेको हो। निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद सेयर तथा ऋणपत्रलगायतका अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पाउनुपर्ने संघको माग छ। त्यस्तै गैरबैंकिङ संस्थाहरु जस्तै– नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको...
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले यही असार ३१ गते वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा पर्वतको कुश्मास्थित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले अन्य उपयुक्त एक वा एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरु आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने, समझदारीमा हस्ताक्ष गर्ने, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न मूल्यांकनकर्ताको नियुक्ति गर्नेलगायतका आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्ने अधिकार सञ्चालक...
आजसम्म कायम सेयरधनीले किसान लघुवित्तको २०% बोनस सेयर पाउने
काठमाण्डौ । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज जेठ १९ गते अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि संस्थाले भोलि जेठ २० गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आज जेठ १९ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो लघुवित्तको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्। संस्थाले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभा यही जेठ २८ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सभा कैलालीको धनगढीमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने विशेष...
राष्ट्र बैंकद्वारा नबिल–एनबी बैंकबीचको मर्जरलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकबीचको मर्जरलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ। आज बिहान राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले नबिल र एनबी बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्विटजरल्यान्डको कार्यक्रम सकेर मंगलबार फर्किएपछि बुधबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृतिसँगै नबिलले अब कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग स्वीकृत लिएर एकिकृत कारोबार गर्ने मिति तय गर्नेछ। एकीकृत कारोबारको सम्भावना यही असार मसान्तअघि नै रहेको स्रोत ...
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई उनीहरुको आफ्नै छनौटको डिजाइनमा व्यक्तिगत फोटोसहितको डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउने सुविधा ल्याएको छ। बैंकले ‘मेरो आफ्नै डेबिट कार्ड’ योजनाअन्तर्गत यो सुविधा ल्याएको हो। बैंक आफ्नै छनोटको डिजाइनमा व्यक्तिगत फोटोसहितको डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउने योजना ल्याउने नेपालकै पहिलो वित्तीय संस्था हो। यस योजनाअन्तर्गतको डेबिट कार्ड प्राप्त गर्न ग्राहकले ग्लोबल आइएमई बैंकको वेबसाइटमार्फत अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्नेछ। कार्डप्रिन्ट गर्नुअघि ग्राहकले आफ्नो डिजाइन अनुसारको कार्डलाई भर्चुअल रुपमा हेर्न र...
जेठ लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. २३ अर्बले बढ्यो, कस्तो छ सीडी रेसियोको अवस्था ?
काठमाण्डौ । जेठ महिना लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जेठ महिना लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २३ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो। गत वैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। जेठ २७ गतेसम्म निक्षेप बढेर ४३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। एनबीएका अनुसार जेठको पहिलो साता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ७ अर्ब रुपैयाँले, दोस्रो साता ६ अर्ब रुपैयाँले, तेस्रो साता ७ अर्ब रुपैयाँले र चौथो साता ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यसैगरी...
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले असार महिनामा लागू हुने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर गत फागुनयता स्थिर राखे पनि कर्जाको ब्याजदर भने निकै उकालो लागेको छ। यसअघि निक्षेपमा बढाएको ब्याजदरले लागत बढ्दा बैंकहरु कर्जाको ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका हुन्। अधिकांश वाणिज्य बैंकको आधार दर बढेर दोहोरो अंक नजिक पुगेको छ। जसका कारण अधिकांश बैंकको कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत माथि पुगेको देखिन्छ। केही वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर भने साढे ११ प्रतिशतको...
वाणिज्य बैंकहरुबीच असारमा पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सहमति
काठमाण्डौ । असार महिनामा पनि निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने वाणिज्य बैंकहरुबीच सहमति भएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायका अनुसार वाणिज्य बैंकका सीईओहरुबीच असारमा पनि ब्याजदर स्थिर राख्ने सहमति भएको छ। ‘भोलि बस्ने संघको कार्य समितिको बैठकले ब्याजदर स्थिर राख्ने र जेठकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिने औपचारिक निर्णय गर्न सक्छ’, उनले भने। वाणिज्य बैंकहरुले माघदेखि निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छैनन्। जसअनुसार असारमा पनि वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ अधिकतम ११.०३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १०.०३ प्रतिशत ब्याज दिनेछन्।...
घोषणपत्र जारी गर्दै साकोस शिखर गोष्ठी सम्पन्न, सहकारीमार्फत समृद्ध एवं आत्मनिर्भर मुलुक निर्माणमा प्रतिबद्ध
काठमाण्डौ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)को आयोजनामा काठमाण्डौमा जारी २ दिने चौथो साकोस शिखर गोष्ठी २०७९ सम्पन्न भएको छ। आइतबारबाट सुरु भएको गोष्ठीमा देशभरका करिब ७ सय ५० जना सहकारीकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल सरकारको समेत सह आयोजना भएको गोष्ठीले १२ बुँदे घोषणपत्र जारी गर्दै आज समापन भएको हो। बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) मार्पmत मर्यादित श्रम सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र स्वरोजगारी सिर्जना गरी समृद्ध एवं आत्मनिर्भर मुलुक निर्माणका लागि उच्च संकल्पसहित यो १२ बुँदे साझा घोषणापत्र गोष्ठीले गरेको छ। ‘दिगो एवम् एकीकृत...
प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनन् : पूर्वरजिस्ट्रार ढकाल
काठमाण्डौ । सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले स्थानीय तह र प्रदेशले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने बताएका छन्। नेफ्स्कुनले आयोजना गरेको साकोस शिखर गोष्ठीका अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वरजिष्ट्रार ढकालले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गरेर सहकारीको नियमन स्थानीय तहलाई दिने अधिकार कटौती गर्नुपर्ने बताए। ‘पालिकालाई सहकारीको नियमन अधिकार दिन सकिँदैन’, उनले भने, ‘यदि अधिकार कटौती नभए सहकारी क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ।’ संसारभर सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने प्रावधान भएको भन्दै ढकालले सहकारीको नियमन...
‘वित्तीय सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्छ’
काठमाण्डौ। ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनका लागि संसदको अर्थ समितिमा पुगेको छ। यता सहकारी ऐन २०७४ ले पनि ५० करोडभन्दा माथिका कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने उल्लेख छ। ‘संसदमा राष्ट्र बैंक ऐन विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले सांसदहरुले सक्रियता देखाएर सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ’, साकोस शिखर गोष्ठीको दोस्रो दिन सोमबार नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव...
राज्यले गर्न नसकेको काम सहकारीले गरेको छ : गृहमन्त्री
काठमाण्डौ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बचतबाट स्रोत र साधनलाई ऊर्जाशील गराउने भूमिकामा सहकारी क्षेत्र रहेको बताएका छन्। उनले नागरिक संगठित गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्पत्तिको मालिक बनाउने, स्रोत र साधनमाथि पहुँच स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका सहकारी क्षेत्रले गरेको बताए। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)को आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहआयोजनामा काठमाण्डौको द सोल्टी होटलमा आजबाट सुरु भएको चौथो साकोस शिखर गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले नागरिकको जीवन परिवर्तमानमा समेत सहकारीको भूमिका...
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्। आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा अभियान्तासँग बुधबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सबैको सुझाव संकलन गरेर बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए। ‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने बिषयमा धेरै सुझाव आएका छन्। यी सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ’, उनले भने। छलफलमा सहकारी क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी सरोकारवाला क्षेत्रका...